Mabhuku aElvira Lindo, wepasi rose mukirasi akazara munyori | Zvazvino Zvinyorwa
John Ortiz | | Biography, marudzi, Mabhuku, Nyaya
Mabhuku aElvira Lindo.
Mabhuku aElvira Lindo ari chinosungirwa kureva zvinyorwa zvevana mune chaiyo uye yepanyama nyika. Kupfuura munyori akazvitsaurira, uyu munyori inyanzvi yekudhirowa uyo akawana budiriro mumhando dzakawanda. Zvinyorwa zvake zvinotangira kubva pakuverenga kwevana kuenda kune nyaya dzevakuru kana zvinyorwa zvefirimu neterevhizheni. Ehe, ndatenda Manolito Magirazi -Bhuku rake rekutanga rakanyorwa- Lindo anozivikanwa zvakanyanya semunyori wenyaya wevana.
Hunhu "Manolito" akamupa mubairo weNational Prize yeVana Mabhuku ya1988 uye yakashanda sekurudziro yemamwe mabhuku manomwe. Uye zvakare, Lindo ane basa rinozivikanwa semutori wenhau, mutambi uye mushamarari, ane basa rakakurumbira muredhiyo. Mune rake rakareba basa rehunyanzvi, akashanda pamwe nevezvemhando yepamusoro vane mukurumbira, kusanganisira: Nyika, Cadena SER, TVE y TV 5.
1 Nhoroondo yaElvira Lindo
1.2 Manolita Magirazi
1.3 Kwake kunyorwa kushanduka
1.4 Mamwe maficha ake ekunyora
2.2 Murombo Manolito (1995)
2.3 Sezvo molo! (gumi nemapfumbamwe nemapfumbamwe nematanhatu)
2.4 Vakasviba mamvemve (1997)
2.5 Manolito munzira (1997)
2.6 Ini uye moron (1999)
2.7 Manolito ane chakavanzika (2002)
2.8 Akanakisa Manolo (2012)
4 Dzimwe nyaya dzevateereri vevana nevechidiki
4.1 Mweya Shamwari (2000)
5 Nezve zvinyorwa zvake zvevakuru
6 Elvira Lindo: munyori azere nehutano
Nhoroondo yaElvira Lindo
Elvira Lindo Garrido akaberekwa muna Ndira 23, 1962, muCádiz, Spain. Akaenda nemhuri yake kuMadrid mushure mekusvitsa makore gumi nemaviri. Mushure mekupedza chikoro chesekondari, akatanga kudzidza utapi venhau kuComplutense University yeMadrid, kunyangwe asina kumbopedza kudzidza. Pazera remakore gumi nemapfumbamwe akawana basa rake rekutanga semushambadzi uye munyori wezvinyorwa paNational Radio yeSpain.
Kutanga kwe Manolito Magirazi muna 1994 zvaireva kutanga kunyora mumavara. Iye hunhu hwakavakirwa naiye pakutanga kune redhiyo. Manolito ndiye protagonist weakateedzana azere nekuseka, kusagadzikana uye kushoropodza kwakashata munharaunda. Olivia ndomumwe weakakosha hunhu hwake pahudiki; Akatsaurira mabhuku manomwe kwaari ese, akaburitswa pakati pa1996 na1997.
Kwake kunyorwa kushanduka
Muna 1998 Elvira Lindo akaburitswa Iyo imwe nharaunda. Iyo inoverengeka yakanangiswa kune vateereri vakuru, Nekudaro, nharo yake yaive yakakurumbira pakati pevechidiki nekuti protagonist yayo ine makore gumi nemashanu. Kuzivikanwa kwaro kukuru kwakaruramisa kugadziriswa kwezita iri kumabhaisikopo. Pamusoro pezvo, Lindo akaburitsa dzimwe nhoroondo gumi dzevakuru, pakati padzo mabhuku Chinhu chinotarisirwa kupfuura kufa (2002) uye Izwi rinobva kwauri (2005).
Kusvikira kumagumo kwema90s, Elvira Lindo akatanga basa rakasimba semunyori cinematographic. Muna 1998 akanyora pamwe naMiguel Albadalejo Husiku hwekutanga hwehupenyu hwangu. Nguva pfupi yapfuura kugadziriswa kwekutanga kwe Manolito Magirazi. Muna 2000 akashandura inoverengeka Mwedzi uzere yemunyori Antonio Muñoz Molina, waakaroora naye. Parinhasi, Lindo anyora zvikamu zvisere zvema skrini.
Mamwe maficha ake ekunyora
Saizvozvo, munyori akaberekerwa Cádiz anga ari munyori uye mushandirapamwe mumapepanhau nemagazini akasiyana siyana, kunyanya mu Nyika. Mazhinji ezvinyorwa zvake akaunganidzwa mune akateedzana ebhuku Zhizha tsvuku (2002, 2003 na2016) uye Chipo chevanhu (2011). Uye zvakare, munyori wechiSpanish akapinda mune isiri-ngano na Husiku pasina kurara (2015) uye Nzira makumi matatu dzekubvisa ngowani yako (2018).
Sekureva kwaSonia Sierra Infante (2009), hunhu Manolito Gafotas "chimwe chezviitiko zvikuru zvetsika dzeSpanish mumakumi emakore apfuura". Yayo redhiyo genesis muzwi remunyori iye akapa nzira yemabhuku mapfumbamwe (ane akawanda edhisheni), akawanda mibairo uye gumi neshanu shanduro. Saizvozvowo, basa iri rinowanikwa mumabhuku mazhinji, mazano ekudzidzisa, mapeji ewebhu, nhepfenyuro yeterevhizheni, mafirimu mafirimu ...
Mutsamba yake yechiremba yeYunivhesiti yeBarcelona, ​​Sierra Infante anotsanangura kuti: "redhiyo mavambo anosarudza pakusarudza izwi rinorondedzera". Zvakanaka, "sarudzo yezwi inodzora kutonga kwemunyori pane izvo zvinotaurwa uye kubva pane izvi sarudzo inomuka, zvakare, chinzvimbo chinowanikwa nemuverengi (wezera, anovimba kana muyenzi ari kure). Mune ino kesi, zvinoita sezviri pachena kuti chaive chakanyatsojeka aive wekutanga munhu mumwechete ”.
Ivo vanonyanya kutaurwa vanoratidzika kuve vanobatanidzwa mune dzakasiyana zviitiko (zvinoita kunge zvisina hukama kune mumwe nemumwe) mumakore asingazivikanwe mutaundi reCarabanchel. Nekudaro, maererano nenguva, vanogona kuiswa pakati pezuva risati ratanga makirasi naApril 14 (zuva rekuzvarwa kwasekuru). Iri zuva rinoenderana nekuzivisa kweChipiri Republic, (chiratidzo chakajeka chezvematongerwo enyika zvemhuri yake).
Iye protagonist anova anonyanya kuratidza nezve rake basa semunhu weruzhinji. Pakutanga anoita pfupiso yemavara echikamu chechipiri ichi nehukama hwavo neiya ebhuku rakatangira. Zviitiko zvinotaurwa naManolito mu "vhoriyamu yechipiri yeiyo huru encyclopedia" nezve hupenyu hwake. Misoro yenyaya inoenderana nekutenda (kune shamwari yake Paquito Medina), kutya uye kusabatsira kwechena nhema pamberi pechinhu chisingadzivisike.
Sezvo molo! (1996)
Vatambi vatsva vanoonekwa muhupenyu hwaManolito nemumwe wake akavimbika, Paquito Medina. Pakati pavo, mukomana anouya kuCarabanchel kuzobvunza Manolito mimwe mibvunzo nezve rake rekare vhoriyamu. Zvakare, inopinda muzviitiko zvevanyori vanonzi "iyo Mustard", waaidzidza naye akataura pamusoro muzvikamu zvakapfuura.
Mutsamba yekutanga, Manolito anoongorora uye anotora mhedzisiro yekutsikisa zvakanyorwa nezve hupenyu hwake (pamwe nekurasikirwa neyakavanzika). Mune rondedzero, chokwadi uye fungidziro zvakasanganiswa, pamwe nekuonekwa kwaElvira Lindo pachake mumutangiro. Iri bhuku rakagamuchira ongororo dzinoyemurika nekuda kwekurapwa kwezvidzidzo zvakaita segodo negodo, kubva mumaonero emwana.
Kusiyana nemabhuku apfuura, uko zviitiko zvezviitiko hazviwanzo kuve zvine hukama, muchinyorwa chino kutevedzana inyaya imwechete. Inorondedzera zvakaitika kuna Manolito parwendo nababa vake. Inobata nenyaya dzinosekesa dzakasiyana senge kutenga vatengi, zvirwere uye hupenyu hwemhuri. Iyo yakakamurwa kuita zvikamu zvitatu: "Goodbye Carabanchel (Alto)", "Vhiki reJapan" uye "El zorro de la Malvarrosa".
Mune ino bhuku, Lindo anowedzera pane maitiro akatanga mubhuku rapfuura: kubvunza nezve miganho yezvakanaka mune zvematongerwo enyika. Chinyorwa chakaumbwa muzvikamu zvitatu: "Vazukuru vako havakukanganwi", "Vana vaviri vakanganwika chaizvo" uye "Chiuru neusiku humwe". Zvakare, nezvikamu zvidiki zvakanangana nemaantics aManolito nemunin'ina wake (iyo Imbécil), mukati mevhiki rekurara kwasekuru sekuvhiya kweprostate.
Chinyorwa chakakamurwa kuita akateedzana ezvitsauko zvinorondedzera kushanya kwameya weMadrid kuchikoro cheCarabanchel. Lindo anotora mukana wechirevo kushoropodza hunhu hwevanyengeri vezvematongerwo enyika mune izvi zviitiko zvezviitiko. Zvimwe zveizvi zvinoratidza - sezvazvakaita mukirasi yaManolito - zvinowanzova nenjodzi. Kune zvikamu zvebhuku rino zvakaenderera mu "The Flying Chinese", mune zvinyorwa zvemunyori zvekuwedzera Nyika yevhiki nevhiki.
Makore gumi gare gare, nyika yaManolito yakashandurwa. Iye akura uye godo rake kunaMoron (munin'ina wake) rakadzikira nekuti izvozvi "Chirly" ndiye mwanasikana wamambo mudiki wemhuri. Ehezve, hapana kushayikwa kwababa vake Manolo, amai Cata, sekuru vake Nicolás, ivo "Orejones", Jihad ... Uye havana kuchinja maonero ake akajeka echokwadi, kuwanda kwekutaura uye kusetsa kwese.
Iwo akateedzana enyambo akanyorwa kune vateereri pakati pemakore matatu neatanhatu ekuberekwa. Ivo vanoratidzwa zvakanyanya naEmilio Urberuaga kuitira kuti vafambise kusangana kwavo mukudzidzisa kwekuverenga. Dingindira rinotarisa pane zvakajairika zvido uye kutya kwevana mumatanho aya.
Kunze kwekunge Olivia netsamba kuna vaMagi (1996), mamwe mazita nezvehunhu akaonekwa muna 1997. Ivo vanotaurwa pano pazasi:
Ambuya vaOlivia vakarasika.
Olivia haadi kugeza.
Olivia haadi kuenda kuchikoro.
Olivia haazive kurasikirwa.
Olivia ane zvinhu zvekuita.
Olivia uye chipoko.
Dzimwe nyaya dzevateereri vevana nevechidiki
Mavari, mifananidzo yaEmilio Urberuaga inoumba sosi inobatsira mukati mematanho ekutanga ekuverenga muvana. Yakazara-mifananidzo mifananidzo inoratidzwa mukuchengeta pamwe nekurondedzera uye inoshanda seyakanyanya inoshanda svikiro rekuburitsa ruzivo. Iyi nhungamiro inoonekwa mu Charanga netambureni (1999) uye Akanga ari mhizha mukuru (2001); pamwe nemazita anotevera:
Mweya shamwari (2000)
Iyo yakanaka nyaya inotenderera kutenderera kwehukama pakati peLulai naArturo. Misoro yakadai sekugamuchirwa (Lulai ari wechiChinese uye akagamuchirwa aine makore matatu), kuregererwa uye kuyananiswa zvinotsanangurwa. Iri ibasa iro Elvira Lindo anosimbisa kudziya kwevanhu pamusoro pechero dzinza, magariro kana tsika.
Mune ino chinyorwa, munyori anobva kuCádiz anozviisa mushangu dzegorilla rakaponeswa neakasikwa John Graham. Lindo anotaurira nyaya kubva pakuona kwembongoro, isinganzwisise hunhu (uye hutsinye kune hunhu) hunhu hwevanhu. Kunyangwe paine hukuru hwekutamba, kune nzvimbo dzekushuva - paanorangarira kufa kwaamai vake - uye kudanana.
Nezve zvinyorwa zvake zvevakuru
Elvira Lindo akaratidzira nemabhuku ake kune vateereri vevanhu vakuru kuti anonatsa mativi akasiyana ezvinyorwa zvekusika. En Chinhu chinotarisirwa kupfuura kufa (2002), Lindo anoratidzira muchato we "cliché" pakati pemunyori akapfuma munyori uye mutori wenhau mudiki. Tsvaga mukati mematambudziko uye kushaya simba kwevanopokana, pamwe nekufungidzira kwevaya vakavakomberedza. Nekuti mune angangoita maziso, akaroora nekuda kwekufarira uye kwete nerudo.
Kune rimwe divi, mu Izwi rinobva kwauri (2005), ivo vanonyanya kutaurwa vari vaviri vanotsvaira mumugwagwa nemaonero maviri akasiyana nezvebasa ravo. Ipo Rosario akatsamwa achishungurudzika, iye Milagros nyoro anofara kuti awana basa rakatsiga. Kunyangwe Rosario achitenda kuti akatungamira hupenyu husina mufaro (uye achipomera munhu wese nezvazvo), anozopedzisira aona kuti Milagros ine nhoroondo inosiririsa zvechokwadi.
Elvira Lindo: munyori azere nehutano
Muhurukuro yakaitwa naNuria Morgado (Arizona Zvinyorwa zveSpanish Zvidzidzo, 2005), Elvira Lindo akatsanangura mamwe emamiriro ezvinhu ane chekuita nekusikwa kwemabhuku. Panyaya iyi, muimbi anobva kuCádiz akasimbisa "… chinhu chakashata nezvevanyori ndechekuti ivo vanove yavo nyanzvi. Zvinotaridza kuti haugone kuita chero chinhu kune avo vakatokumbira kare ”.
Pakupedzisira, Lindo anosiya mutongo unotevera: “Saka handina kunyora chero chinhu (ndichireva chirongwa chakanangana naLorca), asi kwandiri chaive chinhu chakanyanya kushushikana. Saka ndinoda kunakidzwa nemanoveli angu. Ndokureva, kuti kana zvinyorwa zvangu zvikaverengwa muchinguvana, vanofunga kuti ndanga ndiri munhu akararama zvine simba, uye kuti hutano hunogona kunzwikwa ”. Uye sezvo isingamire, akatonyora yake inoverengeka inotevera Vhura moyo kushamisika vateereri vako zvakare.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Zvazvino Zvinyorwa » marudzi » Mabhuku aElvira Lindo